Saraakiil Cadaan ah oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir iyo Wararkii ugu Dambeeyay Xaalada Sheekha	Wararka aan ka heleyno Xarunta ugu weyn Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ilaa maanta ay kusugnaayeen Saraakiil cadaan ah oo la tilmaamay in ay kasoo jeedaan Dalalka Reer Galbeedka kuwaa oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir Aweys. Sheekh Xasan Daahir iyo Xubno kale oo lasocday kana tirsanaa Al-Shabaab ayaa hada ku xiran Xarunta Hay’da Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho waxaan halkaasi Su’aalo adag lagu weediinayaa Sheekh Xasan Daahir iyo Xubnaha kale ee la socda. Ilo kusugan Xarunta Nabad Sugida ayaa sheegay in Sheekh Xasan Daahir uu halkaasi ugu jiro qaab Maxbuus ah lana weediinayo su’aalo la xariira dhinaca argagaxisada ah iyo sababaha ku kalifay in uu kasoo baxsado Al-Shabaab. Lama oga ilaa hada sida ay tahay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xalay Muqdisho laga soo dajiyay laguna xiray Xarunta Nabad Sugida waxaan halkaasi kusii qul qulaya saraakiil Soomaali iyo Cadaan ah kuwaa oo siyaabo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan Sheekh Xasan Su;aalo weydiinaya. Sheekh Xasan Daahir ayaa lasoo sheegayaa in uu daal badan laga dheehanayo wajigiisa sidoo kale uusan hurdin ilaa xalay markii laga soo dajiyay Magaalada Muqdisho , iminkana uu ku xiran yahay Xarunta Nabad Sugida Soomaaliya. Lama oga xaalka Sheekh Xasan Daahir Aweys halka ay ku dambeyn doonto , waxaana wali arinta Sheekh Xasan Daahir aan wax war ah kasoo saarin Dowlada Soomaaliya oo wali ka meer mrreysa in ay ka hadashao Xaalada Sheekh oo hada ga | http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders Saraakiil Cadaan ah oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir iyo Wararkii ugu Dambeeyay Xaalada Sheekha	Wararka aan ka heleyno Xarunta ugu weyn Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ilaa maanta ay kusugnaayeen Saraakiil cadaan ah oo la tilmaamay in ay kasoo jeedaan Dalalka Reer Galbeedka kuwaa oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir Aweys. Sheekh Xasan Daahir iyo Xubno kale oo lasocday kana tirsanaa Al-Shabaab ayaa hada ku xiran Xarunta Hay’da Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho waxaan halkaasi Su’aalo adag lagu weediinayaa Sheekh Xasan Daahir iyo Xubnaha kale ee la socda. Ilo kusugan Xarunta Nabad Sugida ayaa sheegay in Sheekh Xasan Daahir uu halkaasi ugu jiro qaab Maxbuus ah lana weediinayo su’aalo la xariira dhinaca argagaxisada ah iyo sababaha ku kalifay in uu kasoo baxsado Al-Shabaab. Lama oga ilaa hada sida ay tahay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xalay Muqdisho laga soo dajiyay laguna xiray Xarunta Nabad Sugida waxaan halkaasi kusii qul qulaya saraakiil Soomaali iyo Cadaan ah kuwaa oo siyaabo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan Sheekh Xasan Su;aalo weydiinaya. Sheekh Xasan Daahir ayaa lasoo sheegayaa in uu daal badan laga dheehanayo wajigiisa sidoo kale uusan hurdin ilaa xalay markii laga soo dajiyay Magaalada Muqdisho , iminkana uu ku xiran yahay Xarunta Nabad Sugida Soomaaliya. Lama oga xaalka Sheekh Xasan Daahir Aweys halka ay ku dambeyn doonto , waxaana wali arinta Sheekh Xasan Daahir aan wax war ah kasoo saarin Dowlada Soomaaliya oo wali ka meer mrreysa in ay ka hadashao Xaalada Sheekh oo hada ga – http://farayarenews somafarayarenews somalia @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth @xjournalist i teach and speak english arabic ahmaric kiswahili somali and italiano i am a proff. Af languages journalist peace maker chairman of somali youth path finders
Saraakiil Cadaan ah oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir iyo Wararkii ugu Dambeeyay Xaalada Sheekha	Wararka aan ka heleyno Xarunta ugu weyn Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in halkaasi ilaa maanta ay kusugnaayeen Saraakiil cadaan ah oo la tilmaamay in ay kasoo jeedaan Dalalka Reer Galbeedka kuwaa oo su’aalo adag weydiinaya Sheekh Xasan Daahir Aweys. Sheekh Xasan Daahir iyo Xubno kale oo lasocday kana tirsanaa Al-Shabaab ayaa hada ku xiran Xarunta Hay’da Nabad Sugida ee Magaalada Muqdisho waxaan halkaasi Su’aalo adag lagu weediinayaa Sheekh Xasan Daahir iyo Xubnaha kale ee la socda. Ilo kusugan Xarunta Nabad Sugida ayaa sheegay in Sheekh Xasan Daahir uu halkaasi ugu jiro qaab Maxbuus ah lana weediinayo su’aalo la xariira dhinaca argagaxisada ah iyo sababaha ku kalifay in uu kasoo baxsado Al-Shabaab. Lama oga ilaa hada sida ay tahay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo xalay Muqdisho laga soo dajiyay laguna xiray Xarunta Nabad Sugida waxaan halkaasi kusii qul qulaya saraakiil Soomaali iyo Cadaan ah kuwaa oo siyaabo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan Sheekh Xasan Su;aalo weydiinaya. Sheekh Xasan Daahir ayaa lasoo sheegayaa in uu daal badan laga dheehanayo wajigiisa sidoo kale uusan hurdin ilaa xalay markii laga soo dajiyay Magaalada Muqdisho , iminkana uu ku xiran yahay Xarunta Nabad Sugida Soomaaliya. Lama oga xaalka Sheekh Xasan Daahir Aweys halka ay ku dambeyn doonto , waxaana wali arinta Sheekh Xasan Daahir aan wax war ah kasoo saarin Dowlada Soomaaliya oo wali ka meer mrreysa in ay ka hadashao Xaalada Sheekh oo hada ga
June 30, 2013 BASHIR HASHI YUSSUF Leave a comment
→ Dowladda Soomaaliya ayaa amar ku bixisay in la bedelo ciidanka Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose kadib markii sida la sheegay dagaalka Kismaayo ay toos kaga qeyb qaateen ciidankaasi. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo kulan la qaatay xubno kamid ah wasiirada Soomaaliya ayaa kulanka kadib wuxuu sheegay in ciidanka AMISOM ee Kismaayo jooga inay dagaalka ka qeyb qaataan. Wasiir ku xigeenka Wasaarada Warfaafinta C/shakuur Cali Mire oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay amar cad ku bixinayso in la bedelo ciidanka Kenya ee ku sugan Magaalada Kismaayo. Wuxuu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ka xuntahay warka sheegaya in labadii maalin ee lasoo dhaafay ciidanka Kenya ay ka qeyb qaateen dagaalka ka socda Kismaayo ayna la safteen garab kamid ah dhinacyadii Magaalada ku dagaalamay. Wuxuu sheegay in xukuumada markii ay heshay warkaasi go’aan cad ay ku qaadatay in si deg deg ah loo bedelo ciidanka Kenya ee ku sugan Magaalada Kismaayo ee dagaalka Kismaayo ka qeyb qaatay. Dagaalka Kismaayo ka dhacay ayaa wuxuu ku sheegay inuu ahaa dagaal udhaxeeyay ciidan maleeshiyo beeleed ah oo kuwada sugnaa deegaankaasi dhinac kamid ahna ciidanka Kenya ay la safteen. Xukuumadda ayaa ciidanka Kenya ku eedeysay inay madaafiic ku garaaceen dadka shacabaka ah ee ku sugan Magaalada Kismaayo taasi oo khasaaro kala duwan ka geesatay magaalada Kismaayo. Wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay sidoo kale xabsiga dhigeen taliyihii ciidanka Dowladda ee Gobalada Jubbooyinka taasina asyan ka warqabin Dowladda.
← #farayarenews Barre Hiiraale oo shaaciyay halka uu ku suganyahay kuna goodiyay in uu dhawaan ku laabanayo Kismaayo. Barre Aadan Shire, Hiiraale oo maanta si xoog ah ay uga saareen Kismaayo ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe oo is- kaashanaya ayaa waxa uu shaacaiyay in uu ku suganyahy duleedka magaalada uuna isu diyaarinayo qaabkii uu ugu laaban lahaa gudaha magaalada laga sooceyriyay. Barre Hiiraale ayaa waxa uu yiri, “Duleedka magaalada ayaan ku sugannayahay. Waa isi soo hubeyneynaa waana ku laabaneynaa Gudaha magaaladaa waxaa ka socda wax ka baxsan xeeraraka dagaalka aduunka oo ay kamid yihiin kufsi, Boob iyo tacadiyo dheeraad ah oo ay hor- seed u tahay Kenya. Innaga waxaaa magaalada naga soo saaray Kenya. Iyada ayaa hada maamuleysa magaalada oo xaquuqdeenna na duud-siisay”. “Waxyaabaha aan uga baxnay magaalada waxaa kamid ah in dhibaata culus shacabkii loo geysanayo oo madaafiic lagu duqeynayo arintaasina aysan joogsaneyn hadii uu dagaalku sii socdo dadka dhamaanayaana ay dadkeennii yihiin. Waxa aan u tureynay Shacabka. Xeelad meleteri ayeey aheyd ee ma maqnaan donno”, Barre ayaa intaa ku daray hadalkiisa Waxa uu Barre Hiiraale ka jaabay su’aal laga weydiiyay xariirka ka dhexeeya kooxdooda iyo Shabaab maadaama lagu eedeeyo in ay iska ka shanayaan dagaalka Axmed Madoobe arintaas oo uu ku sheegay mid waxba kama jiraan ah hasa yeeshee ay dhici doonto in Shabaabka iyo inta diidan Kenya ay u midoobo doonaan ka xureynta dalka ciidanka Kenya ee soo duulay iyo calooshood u shaqeestayaasha ay difaaca ka dhiganayaan.